WARARKA – Somnews
Akhriso: Digreeto Kasoo Baxday Xafiiska Madaxweynaha Puntland, laguna Magcaabay Wasiiro, Wasiiru…
Madaxweynaha Maamulka Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa maanta 05 June 2016 Xafiiskiisa kasoo saaray digreeto xeer Madaxweyne Lr. 55 June 05, 2017 Madaxweynaha Puntland. Markuu arkay : Dastuurka Maamulka Puntland. Makuu…
Sacuudi Carabiya, Masar, Baxrayn iyo Isutagga Imaaraadka Carabta ayaa xiriirkii dublamaasi u jaray dawladda Qadar iyaga oo ku eedeeyay in ay daganaansho la'aan ka wado gobolka. Wakaaladda wararka ee Sacuudi Carabiya ayaa sheegtay in ay…
Sawirro: Dowladda indonesia oo soomalia ku wareejisay deeq raashin ah oo loogu tala galay dadka ay…
Wasaarada Gargaarka iyo Gudiga Abaaraha iyo Maamulka Gobolka Benaadir ayaa Manta Lagu Wareejiyay Deq Raashin ah oo Loogu Tala Galay Dadka Abaaruhui Sameeyeen. Markabka ay saarneyd deeqdaan gargaarka ah ayaa waxa uu maanta kusoo xirtay…
Madaxweynaha jamhuuriyadda soomalia mudane maxamad c/llahi farmaajo ayaa lagu wadaa in uu socdaal ku tago magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose. Ilo wareedyo ku sugan madaxtooyada villa soomalia ayaa laga soo xigtay in…
Maxkamadda Ciidamada Qalbka Sida ayaa markale u fariisatay kiiska dacwadii la xiriirtay dilka wasiir…
Maxkamadda Ciidamada Qalbka Sida ayaa markale u fariisatay kiiska dacwadii la xiriirtay Allaha Unaxariiste Marxuum x wasiir, xildhibaan Cabaas Siraaji oo ay dilaan ilaalo la socday hanti dhowrihii guud ee qaranka oo ay golaha wasiirada…
Muqdisho, 05 June 2017....Ra’iisul Wasaare ku xigeenka Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya Mudane Mahdi Maxamed Guleed ayaa kulan la yeeshay Madax ka tirsan Barnaamijka Horumarinta ee Qaramada Midoobay (UNDP), waxana ay ka wada hadleen…
Madaxweynaha maamulka galmudug axmad ducaalle geelle xaaf oo ku sugan magaalada caabud-waaq ee gobolka galgaduud ayaa waxa uu kulamo la leeyahay waxgaradka iyo odayaasha dagmada. Xaaf oo shalay gaaray caabud-waaq ayaa xalay ku hoyday…
Ciidamada dowladda iyo kuwa amisom oo ku wajahan deegaanada awdheegle iyo janaale oo shabaab ay ku…
Wararka ka imaanaya gobolka shabeellada hoose ayaa waxa ay sheegayan in ciidamada dowladda iyo kuwa amisom ay dhaq dhaqaaq ciidan ka wadaan deegaano ka tirsan gobolkaasi. Ciidamada huwanta ayaa isku diyaarinaya howlgallo qorsheysan oo…
Sawirro: Turkiga oo soomalia usoo diray markab sida raashin gargaar ah
Wadanka soomalia waxaa kusoo wajahan markab sida shixnad gargaar ah oo dowladda turkiga ay usoo dirtay shacabka soomaliyeed. Markabkaan ayaa waxa uu wadaa deeq raashin ah oo dhan13,000 tan , oo ka kooban nuucyada kala duwan ee cuntadda.…
DEG DEG: Qarax goordhaw ka dhacay magaalada kismaayo
Wararka ka imaanaya magaalada kismaayo ayaa waxa ay sheegayan in goordhaw qarax uu ka dhacay gudaha magaalada kismaayo. Qaraxa ayaa waxaa lagu weeraray saldhig boolis oo ku yaala magaalada kismaayo waxaana ka dhashay qasaaro kala duwan.…